Furtuu qaxxaamura Wardiif
Tarreentaa man'eewwan isaa marti odeeffannoo ati Sarara naqaa irratti galchite waliin tokko tahe qaban uumuuf, Shift+CommandCtrl+Enter. Qaamota tarreentaa gulaaluu hin dandeessu.
Wardii keessatti wardiilee hedduu filachuuf, Ajaja Ctrl gadi qabiitii caancaloota maqaa isa qarree gadii iddoohojii irra cuqaasi. Filannoo keessatti wardii tokko qofa filachuuf, furtuu Shift gadi qabiitii caancala maqaa wardii cuqaasi.
Man'ee keessatti muraa sarara hujeekaa saaguuf, man'ee keessatti cuqaasiitii ittaansuun AjajaCtrl+Enter dhiibi.
Wardii kessa naannaiuu
Qaree man'ee wardii keessa gara tokkoffaatti siqsis (A1).
Qaree man'ee wardii gara man'ee qabiyyee issaa deetaa dhuummatti siqsisuu .
Qaree man'ee wardii keessa gara ammee tarree tokkoffaatti siqsis.
Qaree man'ee wardii keessa gara ammee tarree dhummatti siqsis.
Man'ee tokko gara bitaati siqsis.
Ajaja Ctrl+Page Down
Man'ee tokko gara mirgati siqsis.
Argii tokko gara bitaati siqsis.
Argii fulaa tokko gara mirgati siqsis.
Wardii durra wardi ammee filattameeti Ida'i. Yoo wardiin hundii filattamee, Makaan furtuu qaxxaamura kun wardii durra duwwa filla.Wardii durra wardi ammee godha.
Wardii ittaanee jiru wardii amma filatamanitti ida'a. Yoo wardiileen marti filataman, makaan furtuu qaxxaamuraa kun wardii ittaanu qofa fila. Wardii ittaanu wardii ammaa godha.
kun (*) mallattoo baay'isuu furtuu lakkofsaa irraati
Hammanga deetaa qareen qabbatee jiru filii. Hammangan kun man'ee walliin garee hammanga deetaa qabbatee jiruufi tarree fi tarjaa duwwan marffammee jiirudha .
kun (/) mallattoo hiruu furtuu lakkofsaa irraati
Tarreentaa hangii Foormulaa qaree qabbatee jiru filii.
Man'ee saagi (as in menu Insert - Cells)
Man'ee haqi (as in menu Edit - Delete Cells)
Galchi (in a selected range)
AjajaCtrl+1 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
Gatii gutuummaa man'een kessaa jiru irra foormulaa mul'su ykn dhoksu.
Furtuun ` kun yeroo bayyee kanniin argamuu furtuu kana "1" itti aanee gabatee furtuu engliifaa irra. Yoo gabateen furtuu kee furtuu kana si agarsiisu ba'atee, Furtuu kan birra ramadu ni dandessa: Meeshaale fili - Maamileeesi, Caancala gabatee furtuu irra jiru cuqaasi. Akaakuu "View" fili itti fufuun dalaga "Toggle Formula" fili.
Furtuu dalaga wardii keessatti fayyadameete
Yaadannoo man'ee ammaatti miilteessamee mul'isa
yoo qareen sanduuqa naqa qaqa keeessa qabatee jiru ta'ee Gadeessi qabduu, qaaqan yeroo dhokatuu sanduuqi naqa immoo mul'ataa ta'ee tura. Qaaqa gutummaan mul'iisuf F2 dhiibi.
Masaka Fankishinii bani.
Qaree garra kannati siqsisuun Naqaa Sarara Foormulaa man'ee ammeeti galchuu ni dandeessa.
Bani Maqaa qindeessi qaaqa.
Kuusaa deetaa aloolaa mul'suu ykn dhokisu.
Irkoo haqaa ykn Irkoo waliin qiqindeessuu (for example, A1, $A$1, $A1, A$1) Naqaa dirree kessa.
Mul'suu ykn dhokiisu Naanna'insa.
Ceesisa durran durssu.
Man'ee ammee kessaa ti qubeeffannoo mirkanessuu.
Yoo man'een ammee barruu qabbatee jiiratee waa dhugoomsuu bani.
Haalata filannoo dabalataa bana/dhaamsa. Haalata kana keessatti, filannoo bal'isuuf furtuulee xiyyaa fayyadamuu dandeessa. Filannoo bal'isuuf man'ee biroo keessa cuqaasuus ni dandeessa.
Man'ee gatii qabbatee jiru shoola.
Wardii ammaa keessatti foormulaawwan jijjiiraman lamuu herreega.
Foormulaa man'een hundaa keessa jiru lamuu herreegi.
Taatto issa filattamee haaromsi.
Galmee qajeelcha hojii uumi.
Qajeelcha hojii haaromsi.
Hangii deetaaa filattamee hundaa gurmeesi.
Hangii deetaaa filattamee hundaa garbaasi.
Yabbina tarjaa ammee dheeressuu.
Yabbina tarjaa ammee gabbabsuu.
Yabbina tarjaa ykn hojjaa tarree man'ee ammee irrati hundauun guutolu.
Furtuu qaxxaamuran man'ee dhanguu.
Dahngiin man'ee kana gaddii itti jiru kan hoojjetu gabatee cuqoo ni:
Dhangii Qaqaa Man'ee banii
AjajaCtrl+Shift+1 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
AjajaCtrl+Shift+2 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
Dhangeessuu durtii exponentaialii
AjajaCtrl+Shift+3 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
Dhangii durtii guyyaa
AjajaCtrl+Shift+4 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
Dhangii durtii mahaallaqa
AjajaCtrl+Shift+5 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
Dhangii durtii dhibbeentaa (two decimal places)
AjajaCtrl+Shift+6 (jiifata lakkoofsaarra hin jiru)
Yaalii Fayyadamma deetaa
Xiyyeeffanno garra fuuldurati siqisii iddoo naannoo keessaa fi qaaqa qabduu ti jijjiiri.
Xiyyeeffanno garra duubatti siqisii iddoo naannoo keessaa fi qaaqa qabduu ti jijjiiri.
Xiyyeeffanno garra olii wantoota tokko ti iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Xiyyeeffanno garra gadi wantoota tokko ti iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Xiyyeeffanno garra bitaa wantoota tokko iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Xiyyeeffanno garra mirga wantoota tokko iddoo qaaqa ammee ti siqiisi.
Wantaa issaa durraa qaaqa ammee kessaa jiruu fili.
Wantaa issaa Dhuummaa qaaqa ammee kessaa jiruu fili.
Dirree ammee garra olii man'ee tokko ti siqsisi.
Dirree ammee garra gadi man'ee tokko ti siqsisi.
Dirree ammee garra bitaa man'ee tokoo ti siqsisi.
Dirree ammee garra mirga man'ee tokoo ti siqsisi.
Dirre ammee garra man'ee issaa duurraa ti siqsisi.
Dirre ammee garra man'ee issaa xumura ti siqsisi.
Dirree ammaa bal'ina irraa haqa.
Furtuu qzxxaamura keessaa LibreOffice
Title is: Furtuu qaxxaamura Wardiif